Culimada: Dhaqashada Raga Ethiopia Lagama Ogola – Rasaasa News
Nov 30, 2011 Dhaqashada Raga Ethiopia Lagama Ogola
Kulanka 16 aad ee Aids-ka iyo cudurada la xidhiidha galmoodka oo lagu qabanayo Ethiopia, ayaa waxaa hadheeyey hadalhayn ku saabsan in Ethiopia laga sharciyeeyo xuquuqda dadka ka soo hor jeeda dabeecada lamaane ee dhadig iyo lab.
Shalay galinkii hore ayay ahayd kolkii ay culimada diimuhu joojiyeen kulan ay ku cambaarayn lahaayeen kulan laggaga hadli doono xuquuqda arimaha iyo dhaqashada raga, cudurada galmoodka ee la is qaadsiiyo iyo isticmaalka qandiyada caaga ah.
Ka dib kolkii ay soo baxday in ay culimada diintu doonaynayaan in ay ka hadlaan cambaareeyaana dadka la dhaqdo. Culimada diimaha oo uu u hadlayey Abune Paulos oo ah Orthodix, oo ay hareero fadhiyaan dhamaan madaxda diimaha Ethiopia ayuu Wasiirka caafimaadka Tewodros Adhanom ku soo deg degay, si gaar ahna u waydiiyey hal su,aal ka dibna iska baxay. Culimaduna way joojiyeen shirkii jaraa,id ee ay qaban lahaayeen.
Wasiirka iyo culimadu wax ay is yidhaahdeen ma uusan sheegin, wadaaddaduna dhinacooda waxbama sheegin. Waxaase loo malaynayaa in uu waydiiyey in ayna saxaafada la hadlin, sidaasna ay ku joojiyeen la hadalkii saxaafada.
Waxaa aad ugu soo qulqulaya Ethiopia ururada dadka la dhaqdo,oo ah dadka ugu badan ee uu hayo cudurka Aids-ka iyo kuwa galmoodka ka yimaadaba. Waxaana ku jira baa la leeyahay wufuuda imanaysa Addis Ababa dad la dhaqdo oo caan ah lagana citiraafo aduunka, balse ayna culimada diimaha Ethiopia waxba u arag.
Waxaa kale oo shirka iman doona madaxweynihii hore ee Maraykanka B W Bush, oo la filayo in uu hadal ka jeediyo kulanka 16aad ee Aids ee ka dhacaya Addis Ababa.
Shirkan ayaa muhiim u ah dalka Ethiopia hadii uu si wanaagsan u qabsoomana waxaa u soo hoyan doonta in Ethiopia ay ka dhacaan shirar caalami ah sida ciyaaraha oo kale.
Waxaase shirka ku hoos jira arimo badan oo ay wadaan dadka la dhaqado, arimahaas oo ay doonayaan in ay ururkooda ka sharciyeeyaan Ethiopia si ay u helaan dhalinyaro badan oo baahan oo reer Ethiopia ah.
Culimada diimaha dalka iyo dawlada Ethiopia ayaa waxaa u socda wadahadalo la xidhiidha arimaha shirka iyo ka qayb qaadashada shirka culimada diimaha.
Wariyeyaal waydiiyey dadweynaha su,aal ku saabsan jiritaanka iyo xuquuqda dadka la dhaqo ayey dadweynaha Addis Ababa 97%, ka soo horjeedsadeeb in lagaba hadlo arimahaas.